स्वास्थ – Namaste Dainik
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरुको बुुझाईमा मानव शरीरमा कोरोना परीक्षण प्रक्रिया निकै जटिल छ । यस दौरान पहिले भएको संक्रमणको मृत भाइरस वा त्यसको टुक्रा पनि भेटिनसक्छ । उनीहरुकाअनुसार कोरोन भाइरसबाट मानिस एक हप्तासम्म संक्रमित हुनसक्छ, तर यसपछि पनि धेरै सातासम्म उसको परीक्षण नतिजा पोजेटिभ आइरहनसक्छ । कोरोना परीक्षणका लागि भरोसायुक्त जाँचको तरिका कसरी निकाल्ने ? जहाँ […]
September 8, 2020 NamastedainikLeaveaComment on स्यानिटाइजर किन्दा ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा
रोना भाइरसको महामारी सुरु भएसँगै आम मानिसहरु त्यसबाट जोगिन केही उपायहरु विश्वभरी अपनाइएको छ । सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने अनि बेलाबेलामा साबुन पानी नभए स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको बेला मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र साबुनपानीले हात धुने कार्य हाम्रो जीवनमा निकै बढेको छ। हामी धेरैले यो […]
काठमाडौँ। विश्वभरमा कोरोनाभाइरसको सन्त्रास रहिरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले संसार अर्को महामारीको लागि तयार रहनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमवार डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसस संसारले अर्को महामारीको लागि राम्रोसँग तयार रहनुपर्ने बताएका छन्। उनले विश्वका सबै मुलुकहरुले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्न आह्वान पनि गरेका छन्। डब्लुएचओको जेनेभास्थित मुख्यालयको प्रेस ब्रिफिङमा टेड्रोसले भने, ’कोरोनाभाइरस संसारको अन्तिम […]
September 8, 2020 NamastedainikLeaveaComment on म मृत्युको मुखबाट आएको हुँ, कोभिडसँग खेलबाड नगरौं : डा. कार्की
२२ भदौ, काठमाडौं । विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कोभिड १९ को महामारीलाई नजरअन्दाज गर्नु नहुने बताएका छन् । साधारण भाइरस हो, पीपीई नलगाएरै उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले भ्रम फैलाउँदा मानिसको ज्यान जान समेत सक्ने उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उनले भने, ‘घरमै बसेर बेसारपानी, कागती पानी खाएर […]
September 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on चीनमा बन्दै गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षणका लागि यि चार देशले पाए अनुमति
काठमाण्डौ- चीनमा बन्दै गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परिक्षणका लागी चार देशले अनुमती पाएका छन् । बिबिसीले जनाए अनुसार सर्बिया र पाकिस्तान तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि सहमत भइसकेको र अरु दुई वटा देशले भने डाटा माग गरिरहेको बताइएको छ । सर्बीयामा चीनले नै बनाउँदै गरेको दुई वटा खोपको परीक्षण हुनेछ । पाकिस्तानमा एउटा खोपको परीक्षण […]
September 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कोरोना परीक्षण शुल्क फेरी घट्यो
२१ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा पिसिआर परीक्षण निश्चित व्यक्तिले मात्र गर्न पाउँछन्। लक्षण भएका, संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका र ज्वरो खोकीको लक्षण भएका र अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यक्तिको मात्र सरकारले पिसिआर गर्दै आएको छ। त्यसैबीच, भेरी अस्पतालमा स्वेच्छाले कोरोना भाइरस ( कोभिड १९) को परीक्षण गराउन चाहनेलाई २२ सयमा गराउन पाउने भएको छ । स्वास्थ्य […]
September 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on खुसिको खबर् – रुसले बनाएको को’रोना भ्या’क्सिन सफल।
एजेन्सी । रुसको कम्पनीले निर्माण गरेको कोरोना भा’इरस (कोभिड–१९) वि’रुद्धको खोपको क्लि’निकल परीक्षणको शुरुवाती चरणको नतिजा सकारात्मक देखिएको छ ।मे’डिकल ज’र्नल द ले’सेन्टमा प्रकाशित सूचनाअनुसार क्लि’निकल परीक्षणको दुई चरणमा खो’पले कोरोना भा’इ’रस वि’रुद्ध ल’ड्न आवश्यक ए’न्टिबडी विकास भएको पाइएको छ । ७६ जना मानिसमा गरिएको यो परीक्षणमा सहभागी मानिसहरुमा कुनै ज्व’रो आउनेजस्ता सामान्य सा’इड इ’फेक्ट […]
काठमाडौं । नेपालमा को’रोना सुरु भएको ६ महिना पछि को’रोनाका बारेमा केही सुखद समाचार आउन थालेका छन् । इटालीका बैज्ञानिकले अब को’रोना भा’इरसको क्षमता कम हुँदै गएको दावी गरेका छन् । रोग विशेषज्ञहरुले अब को’रोनाको खोप नबने पनि यसको क्षमता कम हुँदै गएर आफै हराउने दावी गरेका छन् । अमेरिकावाट प्रकाशित न्युयोर्क पोष्टमा उल्लेखित समाचार […]
महोत्तरी, १९ भदौ – कोभिड–१९ म’हामारी नियन्त्रण गर्न महोत्तरीका गाउँ÷नगर बस्तीमा जडिबुटीको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा कोभिड–१९ विरुद्ध रो’ग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन बेसार,अदुवा,गुर्जो,तुलसी,सिन्कौली र पारिजातजस्ता वनस्पतीय ज’डिबुटी निकै प्रभावकारी हुने सन्देश बाक्लै देखिन थालेपछि पछिल्लो समय यहाँ त्यस्ता जडिबुटीको प्रयोग ह्वात्तै बढेको हो । यसबाहेक को’रोना स’ङ्क्रमण पुष्टि भएर दुई साता […]
September 2, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सुरु भयो रेम्डिसिभिर र प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार
१७ भदौ,काठमाडौं । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा पहिलो पल्ट कोरोना संक्रमित बिरामीलाई रेम्डिसिभिर औषधि र प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार शुरु गरिएको छ । भदौ १५ गते कैलालीको धनगढी उपउपमहानगरपालिका-३ का ४८ वर्षीय संक्रमित पुरुषमा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि नेपालगंज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको कोभिड–१९ आईसियूमा भर्ना गरिएको थियो । उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि इन्जेक्टेबल […]